Jereo ny zavatra ilaina rehetra hita any Wina | Bezzia
Inona no jerena ao amin'ny tanànan'i Wina
Susana Garcia | 26/05/2021 10:00 | Lifestyle, Tsangatsangana
I Vienna dia tanàna lehibe sy kanto, miaraka amina firavaka sy fahasarotana mahavariana ny mpitsidika rehetra mandalo azy. Ny renivohitr'i Aostraliana dia faly amin'ny alàlan'ny tranobe manan-tantara, ny zorony ary ny kafe. Raha tianao ny tanàna eropeana rehetra, azo antoka fa tsy hamela anao tsy hiraharaha izany ity iray ity, satria manana io hatsarana taloha io mifangaro amin'ny fikasihan-tanana vaovao sy kanto izay miaina amin'ny tendrony sy ny zorony rehetra.
La Toerana tsidihina ny tanànan'i Vienna. Hojerentsika hoe inona ny toerana tena mahaliana azy, fa toy ny any amin'ny tanàna hafa, mila mamela ny tenanao ianao hitsidika ny toerana rehetra raha azo atao, satria afaka mahita toerana mahavariana foana isika. Avelao ny tenanao ho entin'ny hatsaran-tarehin'i Vienna amin'ny dia manarakao.
1 Lapan'i Schönbrunn
2 Lapan'i Hofburg
3 Tranombokim-pirenena Austrian
Este Ny lapa dia fantatra amin'ny anarana hoe Versailles of Vienna, ary tsy latsa-danja noho ny fisehoany kanto. Ity lapa ity dia naorina tamin'ny taonjato faha-XNUMX teo amin'ny toeran'ny trano fiambenana. Rehefa mandeha ny fotoana dia ho lasa toeram-pialan-tsasatry ny fianakaviana imperial hatramin'ny faran'ny fanjakan'ny mpanjaka tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-XNUMX. Toerana iray izay toerana nisy ilay Emperora malaza Sissi koa. Ny fitsangatsanganana an-dàlana amin'ny lapan'ny mpanjaka dia azo atao famandrihana mba tsy halainao zavatra iray ao amin'ny efitranonao, hankafizanao ireo zaridaina voalamina tsara ireo, ary hahazo tapakila hijerena ny Tranombakoka amin'ny Emperora eo akaikin'ny lapa.
Any amin'ny afovoan-tanàna manan-tantara no ahitantsika lapa iray hafa izay tsy maintsy tsidihina, ny Hofburg Palace. Nandritra ny taonjato enina mahery fonenan'ny fianakavian'ny mpanjaka ao Habsburgs. Ao anatin'ny lapa dia azonao atao ny mitsidika ireo efitrano fandraisam-bahiny taloha, tranombakoka ary trano fiangonana. Ny tranombakoka Sisi, natokana ho an'ny fiainan'ny amperora fanta-daza na volafotsy ao amin'ny fitsarana, dia manaitra manokana.
Naorina tamin'ny taonjato faha-XNUMX Azo lazaina fa iray amin'ireo tranomboky tsara tarehy indrindra eto an-tany izy io, koa raha tianao io karazana habaka io dia aza hadino izany. Ao amin'ny trano famakiam-boky dia ahitantsika ny firafitra baroque style, sarivongana taloha, canvases ary mazava ho azy ny fanangonana boky be dia be.
Ny Opera State Vienna no orinasa opera malaza manerantany. Ny Opera House Vienna dia nosokafana tamin'ny 1869 a Trano Renaissance, misy sanganasan'i Mozart. Tamin'ny taona 1945 dia nisy baomba iray nanimba tanteraka ilay trano ary nandany taona maro vao nanokatra azy io indray. Androany isika dia mbola eo alohan'ny mariky ny tanàna marina, trano manan-tantara manan-danja indrindra. Azonao atao ny mahita ny trano ao anatiny ary manao fitsidihana mitarika koa. Ho fanampin'izany, azo atao ny mividy tapakila mora vidy ho an'ireo asa, ka fotoana mety indrindra io.
Izany no tsena malaza eran'i Viena rehetra ary efa notanterahina hatramin'ny taonjato faha-XNUMX. Tsena mahazatra io ahafahanao mahita trano fivarotana sakafo isan-karazany. Toerana tonga lafatra hijerena ny fiainana andavanandron'ny mponina any Wina sy hividy sakafo eo an-toerana. Ho fanampin'izay, misy faritra fihinanana miaraka amin'ny trano fisakafoanana sy fivarotana, ka mahatonga azy io ho toerana mety hijanonana sy hanandrana lovia mahazatra.
El valan-tanàna, nosokafana tamin'ny taonjato faha-XNUMX, dia iray amin'ireo toerana aleha any Wina. Ny zaridaina dia manana fomba anglisy, miaraka amin'ny tsangambato ho an'i Johan Strauss na ny tranobe Kursalon. Ao amin'ity valan-javaboary manodidina ny 65.000 metatra toradroa ity dia ho hitantsika ny karazana habaka sy zavamaniry maintso.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Lifestyle » Inona no jerena ao amin'ny tanànan'i Wina
Volo simba? Avereno amin'ireto torohevitra ireto
Ny fatoriana miaraka amin'ny vadinao dia mahasoa amin'ny fahasalaman'ny ati-doha